Salaamanews » AHSWJ oo qaadacday maamul u sameynta gobollada Jubooyinka iyo Gedo
Home » Warar AHSWJ oo qaadacday maamul u sameynta gobollada Jubooyinka iyo Gedo Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 2nd, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Ra’isal wasaaraha Ethiopia oo si kulul uga hadlay qodobbo badan (Daawo)Kooxda Al-shabaab oo iskeed iskaga baxday magaalada Ceel-buur iyo meelo kaleCiidamada iskaashanaya oo ku wajahan deegaanno ay ka carartay kooxda Al-shabaabKenya oo beenisay inay kala taageerto Beelaha SoomaalidaDagaal maalintii labaad ka dhacay Gedo oo looga adkaaday ururka al-Shabaab
Afhayeenka Ahlu sunnah waljamaacah, ee gobollada koofurta Soomaaliya Shiikh Maxamed Xuseen Al-qaadii, ayaa sheegay inaanay suurta gal aheyn maamul loo sameeyo gobollada Jubooyinka, isagoo taasi ku micneeyay in kooxda Al-shabaab ay heysato degmooyinka ugu muhiimsan deegaannada.
“Waxaanu ognahay in khawaarijta Al-shabaab ay wali maamusho deegmooyin ka tirsan, Jubooyinka iyo gedo, marka iyadoo aan la xureyn dadka gobolka qaarkood, miyaa la sameyn karaa maamul loo dhanyahay?? Jawaabtu waa maya inagu AHSWJ ahaan waanu mucaaradeynaa maamulka Jubooyinka loo dhisaayo” ayuu yiri Al-qaadii.
Afhayeenka Ahlu sunnah ayaa dhanka kale codsi u diray dowladda Soomaaliya, Raaskambooni, Kenya, Ethiopia, iyo IGAD, isagoo ka codsaday inaanay ku deg ddegin maamulka loo sameynayo Jubooyinka, wuxuuna xusay in fashil ay ku dhamaadeen kulamo ka dhacay Dooloow iyo Kismaayo.
Dhanka kale Afhayeenku wuxuu sheegay in ciidamadoodu ay ku wajahan yihiin magaalooyinka Buurdhuubo iyo Baardheere, oo ay gobolka Gedo kaga suganyihiin ciidamada kooxda Al-shabaab.
Hadalka Afhayeenka AHSWJ Shiikh Maxamed Xuseen Al-qaadii, ayaa imaanaaya xilli dhawaan wasiirro ka tirsan xukuumadda oo gaaray Kismaayo ay sheegeen in leysku raacay hab loo soo dhisi doono maamul loo dhanyahay oo ay sameystaan dadka Jubooyinka iyo Gedo.
Tags: warar « Qoraalkii HoreXubno Al-shabaab ka tirsan oo ismiidaamin fulin rabay oo lagu qabtay Kismaayo	Qoraalka Xiga »AMISOM oo fashilisay weerar lagula eegtay Shabeellaha hoose	Halkan Hoose ku Jawaab